Ny Big Show dia nanambara ny trangan-javatra mahatsikaiky teo amin'ny fiainana anelanelan'ny Andre The Giant sy Hulk Hogan - Wwe
Ny Big Show dia nanambara ny trangan-javatra mahatsikaiky teo amin'ny fiainana anelanelan'ny Andre The Giant sy Hulk Hogan
Ny fifandrafiana Hulk Hogan amin'i Andre The Giant dia mety ho iray amin'ireo mpifaninana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny WWE. Ny fifandonana, izay nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 1980, dia nisy iray tamin'ireo dingana lehibe niavaka nandritra ny WrestleMania 3 fony i Hulk Hogan niaro ny Tompondaka Eran-tany tamin'ny Andre The Giant.
Ny zava-nitranga tao amin'ny lalao dia heverina ho fotoana mampiavaka ny tantara WWE satria naka an'i Andre The Giant i Hulk Hogan ary nikapoka azy teo am-pandehanana hitazomana ny anaram-boninahitra.
FS1 dia mamerina ny hetsika anio alina ary i Renee Young dia nampiantrano vahiny maro tamin'ny lanonana hijerena ny hetsika ary ny iray tamin'izy ireo dia ny WWE Legend, The Big Show.
Ilay Tompondakan'ny WWE teo aloha dia nanohy nanambara tranga tena mahatsikaiky teo amin'i Hulk Hogan sy Andre The Giant izay nanaitra ireo vahiny sasany.
Andre The Giant dia mampianatra lesona an'i Hulk Hogan momba an'i Kayfabe
Ny Big Show dia nampidina anay ny làlan'ny fahatsiarovan-tena ary nanambara ny zava-nitranga tamin'ny fotoana Hulk Hogan no ombelahin-tongony ary Andre The Giant no zazakely. Vanim-potoana nitazomana kayfabe foana.
Samy teo amin'ny sidina iray ihany ireo angano roa ary nokasaina hiatrika ny raharaha taty aoriana rehefa nanapa-kevitra ny hanapaka kayfabe i Hogan. Nihaona tamina mpanamory fiaramanidina iray tao amin'ilay dia i Hulkster ary nanomboka nandihy niaraka taminy teny amin'ny arabe mba hanandramana hifampikasokasoka taminy. Saingy, tsy nipetraka tsara tamin'i Andre The Giant izany.
Hogan aza dia nahazo tapakila frontrow ho an'ny lalao nifanandrinana tamin'i Andre, ary tamin'izay no nanapa-kevitra ny WWE Legend fa hampianatra lesona ny Hulkster.
Vantany vao nanomboka ny lalao dia nanomboka nanala an'i Hogan i Andre ary nanipy azy teo an-joro ary nipetraka teo amin'ny tratran'ny The Hulkster.
Ny zava-nitranga manaraka dia sary mahafinaritra ary tsara kokoa raha henonao ho azy ao amin'ny sioka etsy ambany manomboka amin'ny 1:17.
'Iray amin'ireo tantara mahatsiravina indrindra io.' - @WWETheBigShow mizara zavatra saika tsy mampino @HulkHogan ary Andre The Giant tantara. # WrestleMania3 pic.twitter.com/Emad3hFcwZ
- WWE amin'ny FOX (@WWEonFOX) 13 Mey 2020
Na dia tena nampihomehy aza, ny The Big Show dia nanohy nilaza fa Andre The Giant dia nampianatra lesona an'i Hulk Hogan tamin'io alina io satria ny resaka orinasa no resahina fa tsy ny fahafaham-po ho an'ny tena manokana.
misaraka amiko ho an'ny vehivavy hafa ny vadiko
inona no dikan'izany rehefa misy bandy mijery anao fa tsy mitodika lavitra
rahoviana no manomboka ny zoky lahy
famaritana ny hoe raisina ho azy